IBC 2018 - #IBCShow ၏တစ်ဦးကရော့စ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » အသားပေး » IBC 2018 - #IBCShow ၏တစ်ဦးကရော့စ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ဒါဝိဒ်သည်ရော့စ်၏ CEO ဖြစ်သူ Ross ကဗီဒီယို
IBC ယင်းအသံလွှင့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရဲ့ပြက္ခဒိန်အတွက်အကြီးမားဆုံး tradeshows တစ်ခုဖြစ်သည်နဲ့ content ဖန်တီးသူထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုလာကြည့်ဖို့အတှကျတန်ဖိုးရှိသောအခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒါကြောင့်လည်း4ရက်ပေါင်းကျော်ကျင်းပမယ့်5ရက်ကြာဖြစ်ရပ်င်နှင့်ဧည့်သည်နံပါတ်များအတွက်ကျဆင်းခြင်းဒီနှစ်ပုံစံနှင့်ပြပွဲ၏အရှည်တစ်လျှော့ချဖို့အပြောင်းအလဲကိုတောင်းဆိုပိုကြီးတဲ့ပြသခဲ့သည်တို့တွင်များစွာသောအသံမှအလေးချိန် add ရပါမည်။ NAB 93,000 နေ့ရက်ကာလ၌4ဧည့်သည်များကျော်အတွက်ထုပ်ပိုးနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြီးနောက်ရှိသမျှသည် IBC ရဲ့ 55,000 တက်ရောက်5လိုအပ်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းပြချက်တကယ်ရှိပါတယ်။
ဘေးဖယ်နိုင်ငံရေး, ယခုနှစ်ပြပွဲနှင့်အတူများစွာသောအဓိကအမှတ်တံဆိပ်ကနေထုတ်ကုန်အသစ်ပစ်လွှတ်အပေါ်သိသိသာသာနေသာခြင်းနှင့်သိသိသာသာအလင်းခဲ့သည် Ross ကဗီဒီယို ကလွဲရင်ဖြစ်ခြင်း။ Ross ကဧပြီလ NAB ကတည်းက 21 အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကထုတ်ကုန်များနှင့်သိသိသာသာ updates များကိုအတူ IBC ဆီသို့ရောက် လာ. , - မည်သူမဆိုရဲ့စံချိန်စံညွှန်းအားဖြင့်ထူးခြားတဲ့လုပ်ရပ်။ အသစ်သောထုတ်ကုန်များစာရင်း၏ထိပ်ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ် က Ultra Carbonite တို့ရော့စ်အနေဖြင့်တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က 1RU 3ME ခလုတ်ပလက်ဖောင်း။ $ 11k အမေရိကန်စာရင်းထက်လျော့နည်းခြင်းနှင့်အချို့ဖောက်သည့် signal ကို Processor ကိုအဖြစ်ကဝယ်ယူခဲ့ဤမျှလောက် I / O ဆစ်ဂနယ်များပါဝင်သည်မှာ Carbonite တို့က Ultra စတင်! ဒါ့အပြင်ရော့စ်ကနေအသစ်ကဒီနှစ်ဖြစ်ပါသည် Ultritouchစနစ်ကထိန်းချုပ်နှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်း, တစ်ဦးအပြည့်အဝ-စိတ်ကြိုက်နှင့် Configure လုပ်လို့ရတဲ့ touchscreen က panel က။
Ultritouch Router က, မြင်ကွင်းစုံများနှင့်အချက်ပြအပြောင်းအလဲနဲ့ထိန်းချုပ်မှုများကဲ့သို့ရိုးရာ applications များဖျော်ဖြေဖို့အလျင်အမြန်ထူထောင်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့အစစ်အမှန်အာဏာကိုသင်အလိုရှိသို့သော်သင်အလိုရှိနီးပါးဘာမှပြုနိုင်စွမ်းသည်။ နောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ်လွှတ်သည့်ခဲ့တယ် PIVOTCam-SE, 24x optical zoom နဲ့အတူသစ်တစ်ခုကျစ်လစ်သိပ်သည်း 23 megapixel ကင်မရာ။ အာကာသတစ်ဦးပရီမီယံမှာဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ဘတ်ဂျက်သတ်နေကြဘယ်မှာဘဏ်ဍာများအတွက်စံပြ - မဏ္ဍိုင်-Cam အလွန်လက်လှမ်းစျေးနှုန်းမှာအလွန်အစွမ်းထက်စွမ်းဆောင်ရည်ပေးထားပါတယ်။
ဘေးဖယ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပစ်လွှတ်ကနေ, တကပလက်ဖောင်းအဖြစ် 12 SDI ၏ကျော်ကြားမှုအတွက်ဆက်လက်မြင့်တက်ကြည့်ဖို့ဒီနှစ်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက, ငါသည်သင်တို့၏ပြိုင်ဘက်အားလုံးအနာဂတ်ကိုအိုင်ပီကြောင်းဟုဆိုကာနေကြတယ် "အဓိကဆီမီးကွန်ဒတ်တာကုမ္ပဏီများအားသွားရောက်ကြည့်ရှုနှင့်တစ်ထုတ်လုပ်သူကိုးကားရန်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 12G ချစ်ပ်အောင်စဉ်းစားရန်အထွေထွေတွန့်ဆုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ "ငါ့ကိုနှင့်အခြားသူများများအတွက်ချစ်ပ်ကိုလိုက်နာကြလိမ့်မည်စေ" ရန်သူတို့ကိုမေးတယ်။ သေချာတာပေါ့အလုံအလောက်, သူတို့ကရော့စ်ကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်ဈေးကွက်ထဲမှာ 12G ထုတ်ကုန်များတိုးပွားလာအားလုံးအဓိကထုတ်လုပ်သူများထံမှယခုရှိပါတယ်, ချန်ပီယံ 12G ကြှနျတျောတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက် vindicating နှင့် SDI, 12G နှင့် IP ပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးထွက်ပစ္စည်းများသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဆက်လက်ပြုလေ၏။ ကျနော်တို့ 12G IP ကိုမှအခြေခံအဆောက်အအုံထဲမှာလက္ကားအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့မလိုချင်ကြဘူးသူကိုဖောက်သည်များအတွက်, လက်လှမ်းအကျိုးရှိစွာနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောအဆင့်မြှင့်လမ်းကြောင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ကျနော်တို့သင်တန်း၏, အိုင်ပီ၏အရေးပါမှုကိုငြင်းပယ်မရင့်နှင့်ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့သဘောကျစရာင်လျှင်ဖောက်သည်တစ်ဦး All-IP ကို-based လုပ်ငန်းအသွားအလာမှပြောင်းရွှေ့ကူညီရန်အလွန်ပျော်ရွှင်နေပေမယ့်ကျွန်တော်လည်းလက်တွေ့ဖြစ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားအဖြစ်အများအပြားအမျိုးမျိုးကိုကူညီ ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအဖြစ်ဖောက်သည်၏။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတစ်ဦးကအကြီးအများအပြားထုတ်လွှင့်နေတုန်းပဲ SD ကအတွက် operating နေကြတယ်, ငါသည်လည်းသူတို့၏ CTOs IP ကိုရွှေ့ပြောင်းကျော်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများခြင်းဖြင့်ညအချိန်တွင်နိုးထားရှိမည်လျက်ရှိသည်သံသယ။ အဆိုပါဖောက်သည်အခြားမည်သည့်အဖြစ် Ross ကမှကိုယ့်အဖြစ်တရားဝင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါ, ငါတို့ကသူတို့ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျော်လွှားမကူညီနိုငျသောသူတို့သည်နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်ရနည်းပညာနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုစိန်ခေါ်မှုများသူတို့ကိုပြောပြ၏စိတ်ကူးကိုကြိုက်ကြဘူး။ IP ကိုကလေးမွေးစားခြင်းမြန်နှုန်းအပေါ်မှာငါ့အမြင်များဘို့ဒီနှစ် IBC မှာသတင်းစာဆရာများကမေးတဲ့အခါကိုယ်ကကျိန်းသေတိုးမြှင့်ရဲ့ဟုပြန်ပြောသည်, ဒါပေမယ့် 12G SDI ၏ကလေးမွေးစားခြင်းအမြန်နှုန်းတစ်ခုပင်ပိုမိုမြန်ဆန်မှုနှုန်းမှာတိုးပွားလာနေသည်။ ထုတ်လုပ်သူ 12G အကြောင်းကို sheepish ဖြစ်ဘို့မလိုပါဘူး - ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားနှင့်ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှည်အမြီးဈေးကွက်အတွက်ရှည်လျားသောဂိမ်းကစားရန်ပြင်ဆင်ထားနေသောသူတို့အဘို့အထဲကရှိလည်းမရှိ။
တို့က IBC မှာစတင်ထုတ်ကုန်အပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက Ross ကဗီဒီယို, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.rossvideo.com/IBC/
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက် - အောက်တိုဘာလ 20, 2019
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ CES2017 ဒါဝိဒ်သည်ရော့စ် ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana IBC မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး MStar Ross ကဗီဒီယို SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows စာတန်းထိုး စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2018-09-27
ယခင်: Plura #NABShow New York မှာမြေပြင်-Breaking ထုတ်ကုန်များလွှတ်ပေးရန်
နောက်တစ်ခု: AV စနစ်ဖြန့်ကျက်အင်ဂျင်နီယာချုပ်